Anyị nkwa maka Nzuzo - Tai na-ebi akwụkwọ & nkwakọ ngwaahịa Co., Ltd.
Nkwekorita anyi na nzuzo
Tai na nkwakọ ngwaahịa na-akwado ịkwado nzuzo gị. Iji hụ na nzuzo gị, anyị ezigala ọkwa a na-akọwa ozi niile anyị nakọtara yana otu anyị si eji ya.
Kedu We Collect
Ọrụ anyị na-arụ ọrụ iji jeere ndị ahịa anyị ozi ma nye ha ohere imezu mkpa ha n'ụzọ dị mfe na enweghị nhịahụ dịka o kwere mee. Anyị nwere ike ịnakọta ozi ndị a:
Jiri Of Ozi
A na-eji ozi anyị na-anakọta iji ghọta mkpa gị na zaghachi ajụjụ gị. Anyị anaghị enye ndị ọzọ ozi ọ bụla ma e wezụga ozi mbufe achọrọ iji nyefee ndị ahịa ngwaahịa. Anyị nwere ike kwa oge na-eziga ozi-e nkwado maka ngwaahịa ọhụrụ, onyinye pụrụ iche ma ọ bụ ozi ndị ọzọ anyị chere na ị nwere ike ịmasị nke ọma site na iji adreesị ozi-e nke ị nyere. Nwere ike ịkagbu ọrụ email n'oge ọ bụla.
Nkwekorita anyi na nchekwa data
Anyị na-agba mbọ iji hụ na ozi gị dị nchebe. Iji gbochie nnweta na-enwetaghị ikike, chekwaa data ziri ezi, ma hụ na ejiri ihe ọmụma eme ihe n'ụzọ ziri ezi, anyị etinyela usoro anụ ahụ, kọmputa, na njikwa kwesịrị ekwesị iji chekwaa ma chekwaa ozi anyị na-anakọta na ntanetị.
Kedu We Use Kuki
Anyị na-eji kuki ndekọ okporo ụzọ iji mata peeji ndị a na-eji. Nke a na-enyere anyị aka nyochaa data gbasara okporo ụzọ weebụ ma melite weebụsaịtị anyị iji dozie ya maka mkpa ndị ahịa. Anyị na-eji ozi a maka ebumnuche nyocha gbasara ọnụ ọgụgụ. Anyị nwekwara ike iji ozi a nye gị mgbasa ozi ma ọ bụ ahịa.
Na mkpokọta, kuki na-enyere anyị aka ị nweta ebe nrụọrụ weebụ ka mma site na ị na-enyere anyị aka nyochaa peeji ndị ị hụrụ bara uru na ndị ị na-achọghị. Kuki anaghị enye anyị ohere ịnweta kọmputa gị ma ọ bụ ozi ọ bụla gbasara gị, ma e wezụga data ị họọrọ isoro anyị. Nwere ike ịhọrọ ịnabata ma ọ bụ jụ kuki. Imirikiti ihe nchọgharị weebụ na-akpaghị aka na-anabata kuki, mana ị nwere ike gbanwee ntọala ihe nchọgharị gị iji jụ kuki ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Nke a nwere ike igbochi gị iji weebụsaịtị zuru oke.
Njikọ na- Other Wweebụsaịtị
Weebụsaịtị anyị nwere ike ịnwe njikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ. Agbanyeghị, ozugbo ijiri njikọ ndị a iji hapụ saịtị anyị, ị kwesịrị iburu n'uche na anyị enweghị njikwa ọ bụla na weebụsaịtị ndị ọzọ. Ya mere, anyị enweghị ike ịta ahụhụ maka nchedo na nzuzo nke ozi ọ bụla ị nyere mgbe ị na-eleta saịtị ndị dị otú ahụ na saịtị ndị dị otú ahụ anaghị achịkwa nkwupụta nzuzo a. Kwesịrị ịkpachara anya ma lelee nkwupụta nzuzo ahụ metụtara na weebụsaịtị a na-ekwu okwu.
Na-achịkwa Ynke anyi Personal Iihe omuma
Nwere ike ịhọrọ igbochi nchịkọta ma ọ bụ ojiji nke ozi nkeonwe gị. ọ bụrụ na ị kwubiri na mbụ iji ozi nkeonwe gị maka ebumnuche azụmaahịa, ị nwere ike ịgbanwe obi gị n'oge ọ bụla site na ịdegara ma ọ bụ zitere anyị ozi email na service@taiinpackaging.com, Isiokwu: Mmelite Ozi Nkeonwe.
Anyị agaghị ere, kesaa ma ọ bụ gbazite ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ belụsọ na anyị nwere ikikere gị ma ọ bụ iwu chọrọ ka anyị mee ya.
Ọ bụrụ na ị kwenyere na ozi ọ bụla anyị na-ejide gị ezighi ezi ma ọ bụ ezughi oke, biko degara ma ọ bụ zitere anyị ozi ozugbo enwere ike. Anyị ga-emezi ozi ọ bụla achọpụtara dị ka nke ezighi ezi.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ ma ọ bụ nchegbu gbasara iwu nzuzo ndị a, biko zitere anyị email na service@taiinpackaging.com.
Bag Nkwado, Nkwalite Onyinye, Lamination Onyinye Box, Igbe Onyinye, Corrugated Carton Box, Igbe Onyinye Ngosiputa Ngwa,